Sahaydii ugu horeeysay ee gargaar oo la gaarsiiyay deegaanada ay duufaantu asiibtay ee Puntland.
on November 14 2013 Maamulka Puntland ayaa sheegay in sahaydii gargaar ee ugu horeeysay la gaarsiiyay qaar ka mid ah deegaanada ay duufaantu ku dhufatay deegaanada waqooyi bari ee Puntland.
C/laahi Jaamac Ilko-jiir oo ah wasiirka arimaha gudaha ee maamulka Puntland ayaa sheegay in gargaar la gaarsiiyay tuulooyin ay ka mid yihiin Qarxis, Geel-hore, Cir-madoobe iyo tuulooyin kale oo ku yaala deegaanada ay duufaantu saameysay.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in gargaarka la gaarsiisay goobahaasi uu ka yimid magaalada Boosaaso, isagoona xusay inay jiraan boqolaal qof iyo xoolo laga badbaadiyay meelaha ay roobabka dabeylaha wato ku dhufteen.
Wuxuu hadalkiisa intaas ku daray inay jiraan dad iyo xoolo wali ku go�doonsan goobaha ay biyuhu wali ku jiraan iyo dad badan oo ku dhintay deeganadaasi.
Dadkaas dhintay ayaa waxa uu wasiirka sheegay inay u badnaayeen caruurta da�doodu ka yar tahay 7-jir iyo dadka waayeelka, isagoona dhinaca kale tilmaamay inay weli socdaan dedaalo kale oo la doonayo in gurmad lagu gaarsiiyo dadka ay musiibadu saameysay.
Ilaa 150 ruux ayaa guud ahaan la xaqiijiyay inay ku geeriyootay duufaantii wadatay roobabka ee ka dhacday deegaanada waqooyi bari ee Puntland, iyadoo laga cabsi qabo in dhimashada ay gaarto tiro intaas ka badan.